Nin la baxay magaca 'Nebi' oo muran ka dhex abuuray dalalka - Axadle | Wararka Africa
Nin isku magacaabay “nebi” iyo milyaneer muran badan dhaliyay ayaa lagu xiray dalka Malawi kadib markii uu isku dhiibay booliska isaga oo si layaableh uga soo baxsaday dalka Koonfur Afrika, halkaas oo looga soo oogay dacwad la xiriirta musuqmaasuq iyo lacago sharci daro ah.
Dhacdadan ayaa dhacday usbuucii la soo dhaafay waxaana ay khilaaf diblomaasiyadeed ka dhex abuurtay dalalka Koonfurta Afrika iyo Malaawi, iyada oo Pretoria sheegtay in ay ka carootay in Shepherd Bushiri iyo xaaskiisa ay ku guuleysteen in ay dalka ka baxaan iyagoo damaanad ku jira.
“Lamaanaha runti gacantayada ayaay kujiraan. Waqtigan xaadirka ah, waxaan ka qaadaneynaa qoraallada Bushiris. Kadib waxaan geyn doonnaa maxkamadaha, ”ayuu afhayeenka booliiska Malawi James Kadadzera oo la hadlay wakaalada wararka dpa Arbacadii.
Bushiri iyo xaaskiisa, Mary, ayaa xabsiga ku sii jiri doona inta maxkamad la soo taagayo, sida uu sheegay mid ka mid ah qareenadooda, oo lagu magacaabo Khumbo Soko.
Bushiri, oo ah milyaneer, ayaa horaantii asbuucaan sheegay inuu ka qaxay Koonfur Afrika, sababo la xiriira amaanka naftiisa.
“Maaha nin baxsad ah,” ayuu yiri afhayeen u hadlay ninkaan.
Wuxuu u joogaa Malawi inuu raadsado caddaalad, taasoo uu rumeysan yahay inaan laga heli karin Koonfur Afrika.
Lamaanahan ayaa caan ku ahaa qaab nololeedkooda qaaliga ah ee Koonfur Afrika. Bushiri wuxuu hantidiisa ku kasbaday tabarucaad uu ka helay kuwa raacsan kaniisadiisa Enlightened Christian Gathering oo ku taal Pretoria. Wuxuu kaloo maalgashi ballaaran ku sameeyay macdanta, isgaarsiinta iyo goobaha loo dalxiis tago.
Koonfur Afrika ayaa ku mashquulsan sidii loo ogaan lahaa sida Bushiri uga baxsaday dalka oo ay uga bilaabatay dacwado sharci ah oo lagu xaqiijinayo dhibaatadda uu tirsanayo.
Hogaamiyaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa u sheegay channel-ka wararka ee maxaliga ah ee ENCA in arrinta Bushiri ay quseysay dalalka Malawi iyo Koofur Afrika
Ramaphosa wuxuu sheegay inuu filayo “warbixin faahfaahsan oo ku saabsan dhamaan sheekooyinka Bushiri… markaa waan arki doonaa waxa ay u baahan tahay in la qaado sababta oo ah waxa dhacay wax aysan suurta gal ahayn in ay dhacaan”.
“Waxaan qaadi doonaa tallaabo, taasi waa hubaal,” ayuu yiri. Isagu oo ku dhawaaqay in ninka la baxay magaca ‘nebi’ inuu isku dhiibay booliska Malawi.
axadle 2962 posts
Natiijadii La Wada Sugayay Ee Baadhitaanka Korona Ee Luis